Homeअन्तरवार्ता‘साउनमा संक्रमित ३९ हजार नाघ्छन्, जोखिम बढेका ठाउँमा कडा लकडाउन हुन्छ’
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल अनलाइनखबरसँग कुराकानी सुरु गर्नुअघि स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयमा विज्ञहरुसँगको छलफलमा थिए । कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दा पनि आगामी साउन अन्तिमसम्म संक्रमितको संख्या ३९ हजार नाघ्ने मन्त्री ढकालले विज्ञहरुको आकलन सुनाए ।
प्रस्तुत छ, स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर कार्यालयचाहिँ खोल्ने, तर त्यहाँ जाने सेवाग्राहीका लागि सार्वजनिक यातायात नखोल्ने कुराले अप्ठेरो पर्‍यो भनिँदैछ, सार्वजनिक यातायात खोल्नेबारे सरकारको योजना के छ ?
कोभिड-१९ विरुद्धको नेपालको लडाइ अब कुन चरणमा पुगेको हो ?
अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै हामीले अस्ति ७ हजार ४ सयसम्मको पीसीआर रिपोर्ट नै एक दिनको दिने ठाउँमा हाम्रो क्षमतालाई बिस्तार गर्‍यौं । सातवटै प्रदेशमा ल्याब छन् । त्यसलाई अझ विस्तार गर्न लागिरहेका छौं । तयारी नभएको भए यी २२ वटा पीसीआर ल्याबचाहिँ के महामारीले आफैं बोकेर ल्याएर स्थापित गरिदिएको हो र ? तर, पनि आलोचना गर्नेलाई त हामी सम्मान नै गर्छौं ।-अनलाइन खबरबाट